Mogadishu Journal » 2019 » December » 4
Mjournal :-Go’aanka ra’iisul wasaare Abiy Ahmed uu ku baabi’inayo isbahaysiga haya talada dalka Itoobiya, bilo ka hor doorashada 2020, ayaa waxa uu dhalleeceyn kala kulmay xubno sare oo ka mid ah dowladdiisa. Wareysi uu siiyey laanta Afaan Oromo ee VOA, ayaa wasiirka...
Guddoomiyihii degmada Awdheegle oo qarax lagu dilay
Mjournal :-Wararka laga helayo degmada Awdheegle ee Gobolka Shabelelaha Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in Goordhow qarax Miino lala eegtay guddoomiyihii degmadaas Maxamed Yarow.isla markaana qaraxaasi uu u geeriyooday. Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali...
Mjournal :-Qoyska madaxweynihi hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa u gudbiyay maxkamad sare oo ku taalla magaalada Harare cadadka hantida uu ka tagay, taasoo la sheegay in qoysku uu rabo in si sharci ah loogu qeybiyo dhaxalka uu uga tagay Mugabe. Wargeyska Herald ee ku...
Mjournal :-Wararka laga helayo Gobolka Sanaag ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamo ka tirsan Soomaaliland ay buux dhaafiyeen meel u dhow Buuraleyda Ceerigaabo,halkaas oo ay ku sugan yihiin Ciidamo daacad u ah Korneyl Caare oo dagaal kula jira Soomaaliland. Ciidamo farabadan oo ka...
Mjournal :-Xubnaha Aqalka Wakiilada dalka Mareykanka ayaa meel mariyay shaci ka hortagaya waxa loogu yeeray xarig aan sabab lahayn, jirdil, iyo dhibaateyn xukumadda Shiinuhu ku heyso muslimiinta Uighur ee ku nool gobolka Shinwaa. Xubnaha Aqalka ayaa ku baaqay in bartilmaameedku...
Mjournal :-Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta dood ka leh sharciga doorashooyinka heer Federaal, kaasoo todobaadkii hore loo qeybiyay Xildhibaanada. Sharcigan oo bishii May ee sanadkan ay ansixiyeen Xukuumadda, isla markaana loo...
Mjournal :-Hay’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa baahisay sawirka Nin ay Hay’adu sheegtay in la qabtay,isaga oo doonayey in uu bam gacmeed weerar ku geysto. Ninkaan oo NISA sheegin Magaciisa ayaa la sheegay in uu ka tirsanaa Al-Shabaab,isla markaana...
Mjournal :-Taliyaha guud ee Ciidanka Booliska Dowlad goboleedka Puntland Sareeyo Gaas Muxudiin Axmed Muuse ayaa waxaa uu Shaqada ka joojiyey Taliyaha Qeybta Booliiska gobolka Nugaal G/sare Muumin Cabdi Shire. Taliyaha guud ee Ciidanka Booliska Puntland Sareeyo Gaas Muxudiin...